China Umzi mveliso oPhezulu oPhezulu oPhezulu oPhakamileyo weKhaya laMandla oLawulo lweeMbane eziPhezulu zePlagi yeWifi yase-UK abavelisi kunye nabathengisi | IQHAZA
Ulawulo olukude lwe-APP: Cima / ucime i-elektroniki naphi na kwifowuni yakho ephucukileyo kunye nenkqubo yeMeross. Ungajonga ukubona imeko yezixhobo eziqhagamshelekileyo naphi na. Yonke idatha ihanjiswa ngokukhuselekileyo kwaye igcinwe kusetyenziswa iiseva ze-AWS e-US.
Ulawulo lwelizwi: Lawula izixhobo zakho simahla, yenza nje ilizwi ngelizwi ukuba ucime / ucime izixhobo ezixhunyiwe. Iyahambelana neAmazon Alexa, uMncedisi kaGoogle kunye neeSmartThings. SUKUXHASA iApple Homekit. Nceda uskrolele ezantsi kwaye ujonge kwi "Isikhokelo soBuchwephesha-Isikhokelo somsebenzisi" ukubona indlela emitsha yokumisela.
Unxibelelwano oluthembekileyo: Umboneleli weChipset efanayo ngeAmazon Echo. Iiplagi ezifanelekileyo zeMeross zisebenza ngeMediatek Iot chipset ebonelela ngeetshipsi kwizithethi zeAmazon Echo. I-chipset enamandla inika amandla iiplagi ze-wifi ezingcono kakhulu kunezinye. Iyakwazi ukuba noludwe olude lwe-WiFi kunye nenqanaba lokukhutshwa elisezantsi kuninzi lwabakhuphisana nabo.
Ishedyuli kunye nokuCwangciswa kweXesha: Unokwenza ishedyuli edityanisiweyo yokuvula nokucima ngokuzenzekelayo. Isibonelelo esongeziweyo sokugcina amandla xa izibane zingafuneki okanye zishiywe ngengozi. Xhasa ukuphuma nokutshona kwelanga.
Umgangatho kunye neNkonzo: Iplagi encinci yenziwe ngezinto eziludangatye zePC, yamkelwe ukhuseleko kunye nokuqinisekiswa komgangatho. Iqinisekisiwe yi-ETL kunye neFCC eMelika. Kwaye ixhasa nasiphi na isixhobo sasekhaya ukuya kuthi ga kwi-16A. Nayiphi na ingxaki, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi ngaphandle kwamathandabuzo kwaye siya kufumana isisombululo de waneliseke.
Isiqinisekiso Iinyanga ezi-3-1
Isiqinisekiso I-FCC / iROSH
Inombolo yomzekelo I-SNW-201
Kulinganiswe ngoku 16A
Egqithileyo Ixabiso leFektri yoMvelisi weeMitha zamandla eziBalo zeWifi yeWifi eyiPlagi 16A UK Iplagi encinci
Okulandelayo: Umzi-mveliso oPhezulu oPhezulu waMandla oMbane weeMitha eziBalulekileyo zeWifi plug
Umgangatho oPhezulu we-Wholesale Custom Lix Power Meter ...
Umzi mveliso oshushu we-US UK EU 6A 100-240 Volt Smart ...
Factory Made 100-250V 3USB + Uhlobo-C Eu Plug Powe ...